हाइपोथायरायडिज्म, थप र थप महिला को लागि एक स्वास्थ्य खतरा
समय: 2019-09-27 दृश्य:
अधिक र अधिक महिला थाइरोइड रोग ग्रस्त छन्, र हाइपोथायरायडिजम एक साधारण हो. यसले स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्छ र खराब मुडलाई निम्त्याउँछ. थाइरोइड स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य को लागी धेरै भन्दा बढि महत्वपूर्ण भएको छ.
थाइरोइड एक पुतली आकारको ग्रन्थि हो जुन घाँटीको अगाडि तल बस्दछ. तपाईंको थाइरोइड तपाईंको आदमको स्याउ मुनि रहेको छ, वाइन्डपाइपको अगाडि. थाइरोइडको दुई साइड साइडहरू छन्, एक पुल द्वारा जडान (isthmus) बिचमा. जब थाइरोइड यसको सामान्य आकार हो, तपाईं यो महसुस गर्न सक्नुहुन्न.
खैरो रातो रंगमा, थाइरोइड रक्त वाहिकाले धनी हुन्छ. आवाजको गुणस्तरको लागि महत्त्वपूर्ण नर्भ्स पनि थाइरोइड मार्फत जान्छ.
थाइरोइडले धेरै हर्मोनहरू गुप्त राख्छ, सामूहिक रूपमा थाइरोइड हार्मोन भनिन्छ. मुख्य हार्मोन थाइरोक्सिन हो, T4 पनि भनिन्छ. थाइरोइड हार्मोनहरूले शरीरभरि काम गर्दछ, चयापचयलाई प्रभाव पार्दै, विकास र विकास, र शरीरको तापक्रम. शैशवकाल र बाल्यावस्थाको बखत, दिमागको विकासको लागि पर्याप्त थाइरोइड हर्मोन महत्त्वपूर्ण छ.
हाइपोथायरायडिज्म, पनि भनिन्छ अविकसित थाइरोइड वा कम थाइरोइड, एन्डोक्राइन प्रणालीको एक बिरामी हो जसमा थाइरोइड ग्रंथि पर्याप्त थाइरोइड हर्मोन उत्पादन गर्दैन। यसले धेरै लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै चिसो सहन सहन नसक्ने क्षमता, थकानको भावना, कब्ज, डिप्रेसन, कपाल झर्ने, र तौल बढ्नु। कहिलेकाँही घाँटीको अघिल्लो भागमा गोइटरको कारण सूजन आउन सक्छ. गर्भावस्थामा उपचार नगरी हाइपोथायरायडिज्मले ढिलाइ विकास र बौद्धिक विकासमा ढिलाइ गर्न सक्छ बच्चा वा जन्मजात आयोडिन कमी सिन्ड्रोममा.
वजन बढाउन वा वजन बढाउन कठिनाई
भद्दा, सुख्खा कपाल
सुक्खा, फिक्का फिक्का छाला
चिसो असहिष्णुता (तपाईं आफ्नो वरिपरिको जस्तो चिसो तापमान सहन सक्नुहुन्न)
मांसपेशी ऐंठन र बारम्बार मांसपेशी दर्द
प्रत्येक व्यक्ति बिरामीसँग यी लक्षणहरूको कुनै पनि संख्या हुन सक्छ, र तिनीहरू थाइरोइड हार्मोनको कमीको तीव्रता र शरीरको हर्मोनको उचित मात्राबाट वञ्चित गरिएको समयको लम्बाइसँग फरक हुनेछ।.
तपाईंको मुख्य गुनासोको रूपमा तपाईं यी लक्षणहरू मध्ये एक हुन सक्नुहुन्छ, जबकि अर्कोमा त्यस्तो समस्या हुँदैन र पूरै फरक लक्षणबाट ग्रस्त हुनेछ. धेरै व्यक्तिसँग यी लक्षणहरूको संयोजन हुन्छ. कहिलेकाँही, हाइपोथायरायडिजमका केही बिरामीहरूको कुनै लक्षण हुँदैन, वा तिनीहरू केवल यति सूक्ष्म छन् कि तिनीहरूले ध्यान दिएनन्.
यदि तपाईंसँग यी लक्षणहरू छन्, तपाईंले आफ्नो डाक्टरसँग उनीहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक छ. यसबाहेक, तपाईंले एन्डोक्रिनोलजिस्टको सीप खोज्नु पर्ने हुन सक्छ। यदि तपाईं हाइपोथायरायडिजमको लागि पहिल्यै नै निदान गरिएको छ र उपचार गरिसक्नु भएको छ र यी कुनै पनि वा यी सबै लक्षणहरू हुन जारी राख्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो चिकित्सकसँग छलफल गर्नु पर्छ।
सामन्यतया, यदि तपाइँ बढि थाकेको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँको डाक्टरले एक अनावक्रिय थाइरोइडको लागि परीक्षण गर्न सक्दछ, शुष्क छाला छ, कब्ज र वजन, वा पहिलेको थाइरोइड समस्या वा एक गोइटर भएको छ.
हाइपोथायरायडिजमको निदान तपाईको लक्षण र रगत परीक्षणको नतीजामा आधारित हुन्छ जुन TSH को स्तर र कहिलेकाँही थाइरोइड हार्मोन थाइरोक्सिनको स्तर मापन गर्दछ।. थाइरोक्साइनको एक कम स्तर र TSH को उच्च स्तरले एक अनावृत थाइरोइड स indicate्केत गर्दछ. त्यो हो किनकि तपाईको पिट्यूटरीले अधिक थाईरोइड हर्मोन उत्पादन गर्न थाइरोइड ग्रंथिलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रयासमा थप TSH उत्पादन गर्दछ।.
डाक्टरहरूले विगतको भन्दा धेरै थाइरोइड विकारहरूको पहिचान गर्न सक्दछन् — प्राय: जसो तपाइँ लक्षणहरू अनुभव गर्नु भन्दा पहिले. किनभने TSH परीक्षण उत्तम स्क्रीनिंग परीक्षण हो, तपाईको डाक्टरले सुरुमा TSH जाँच्नेछ र आवश्यक भएमा थाइरोइड हर्मोन परीक्षणको साथ अनुसरण गर्ने छ.
TSH परीक्षण पनि हाइपोथायरायडिजम प्रबन्ध गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ. तिनीहरूले तपाइँको डाक्टर लाई औषधीको सही खुराक निर्धारण गर्न मद्दत गर्छन्, दुवै सुरुमा र समयसँगै.
साथै, TSH परीक्षणहरू उप-क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म भन्ने अवस्था निदान गर्न मद्दतको लागि प्रयोग गरिन्छ, जसले सामान्यतया बाहिरी संकेत वा लक्षणहरू निम्त्याउँदैन. यो अवस्थामा, तपाईंसँग ट्रायोडायोथिरोइन र थाइरोक्सिनको रगतको स्तर सामान्य हुन्छ, तर TSH को सामान्य तह भन्दा उच्च.
त्यहाँ केहि कारकहरू छन् जुन थाइरोइड समस्याहरूको लागि रगत परीक्षणलाई असर गर्न सक्छ. एउटा रक्त-पातलो औषधी हो जसलाई हेपेरिन भनिन्छ. अर्को बायोटिन हो, भिटामिन एक स्ट्यान्ड-एक्लो पूरकको रूपमा वा मल्टीभिटमिनको अंशको रूपमा लिइन्छ. रगत परीक्षण गरिसक्नु अघि तपाईको डाक्टरलाई कुनै पनि औषधि वा पूरकहरूको बारेमा थाहा दिनुहोस्.
जब तपाईंको थाइरोइडले पर्याप्त हर्मोनहरू उत्पादन गर्दैन, तपाईंको शरीरमा रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको सन्तुलन परेशान हुन सक्छ. त्यहाँ धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, Autoimmune रोग सहित, hyperthyroidism उपचार, विकिरण चिकित्सा, थाइरोइड सर्जरी र केहि औषधिहरू.
तपाईंको थाइरोइड सानो छ, तपाईंको घाँटीको अगाडिको आधारमा पुतलीको आकारको ग्रंथि अवस्थित छ, तपाईंको आदमको एप्पलको तल मात्र. थाइरोइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित हर्मोनहरू — ट्रायोडायोथेरोनिन (T3) र thyroxine (T4) — तपाईंको स्वास्थ्यमा ठूलो प्रभाव पार्दछ, तपाईंको मेटाबोलिज्मको सबै पक्षहरूलाई असर गर्दै. यी हार्मोनहरूले महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको नियन्त्रणमा पनि असर गर्दछ, जस्तै शरीरको तापक्रम र मुटुको दर.
थाइरोइड ग्रंथिले पर्याप्त हर्मोनहरू उत्पादन गर्न असफल हुँदा हाइपोथायरायडिजमको परिणाम दिन्छ. हाइपोथायरायडिजम धेरै कारकका कारण हुन सक्छ, लगायत:
Autoimmune रोग. हाइपोथायरायडिज्मको सब भन्दा साधारण कारण हसिमोटोको थाइरोइडिटिसको रूपमा चिनिने एक अटोइम्यून डिसऑर्डर हो. स्वत: प्रतिरक्षा विकारहरू देखा पर्दछ जब तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीले एंटीबडीहरू उत्पादन गर्दछ जुन तपाईंको आफ्नै टिश्यूहरूमा आक्रमण गर्दछ. कहिलेकाँही यो प्रक्रियामा तपाइँको थाइरोइड ग्रंथि समावेश छ.
वैज्ञानिकहरू किन त्यसो गर्छन् भन्ने कुरामा निश्चित छैनन्, तर यो सम्भावित कारकहरूको संयोजन हो, जस्तै तपाईंको जीन र वातावरणीय ट्रिगर. यद्यपि यो हुन्छ, यी एन्टिबडीहरूले थाइरोइडको हर्मोनहरू उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतालाई असर गर्दछ.
हाईपरथायरॉइडिज्म उपचार को लागी अत्यधिक प्रतिक्रिया. व्यक्ति जो धेरै अधिक थाइरोइड हर्मोन उत्पादन गर्छन् (hyperthyroidism) अक्सर रेडियोएक्टिभ आयोडिन वा एन्टि-थाइरोइड औषधिहरूको उपचार गरिन्छ. यी उपचारहरूको लक्ष्य थाइरोइड समारोह सामान्यमा फिर्ता प्राप्त गर्नु हो. तर कहिलेकाही, हाइपरथायरायडिजम सुधार गर्नाले थाइरोइड हर्मोन उत्पादन धेरै कम कम गर्न सकिन्छ, स्थायी हाइपोथायरायडिज्मको परिणाम स्वरूप.
थाइरोइड सर्जरी. तपाईंको थाइरोइड ग्रंथिको सबै वा ठूलो अंश हटाउनाले हर्मोन उत्पादन घट्न वा रोक्न सक्दछ. त्यो अवस्थामा, तपाईंले जीवनको लागि थाइरोइड हर्मोन लिन आवश्यक छ.
विकिरण चिकित्सा. टाउको र घाँटीको क्यान्सरको उपचारको लागि प्रयोग गरिने विकिरणले तपाईंको थाइरोइड ग्रंथिलाई असर गर्न सक्छ र हाइपोथायरायडिजम हुन सक्छ.
औषधी. धेरै औषधीहरूले हाइपोथायरायडिज्ममा योगदान पुर्‍याउन सक्छन्. त्यस्तै एउटा औषधि लिथियम हो, जुन केहि मनोवैज्ञानिक विकारहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरीन्छ. यदि तपाइँ औषधि लिदै हुनुहुन्छ, तपाईंको थाइरोइड ग्रंथिमा यसको प्रभावको बारेमा तपाईंको डाक्टरलाई सोध्नुहोस्.
कम अक्सर, निम्न मध्ये कुनै एकबाट हाइपोथायरायडिजम परिणाम हुन सक्छ:
जन्मजात रोग. केही बच्चाहरू दोषपूर्ण थाइरोइड ग्रंथि वा कुनै थाइरोइड ग्रंथिको साथ जन्मेका हुन्छन्. धेरै जसो केसहरूमा, थाइरोइड ग्रंथि अज्ञात कारणहरूले गर्दा सामान्य रूपमा विकसित हुन सकेन, तर केहि बच्चाहरूको विरासतमा यो विकारको प्रकार हुन्छ. अक्सर, जन्मजात हाइपोथायरायडिज्म भएका शिशुहरू जन्म दिनमा सामान्य देखिन्छन्. यो नै एक कारण हो किनकी धेरै राज्यहरूलाई अब नवजात थाइरोइड स्क्रीनिंग आवश्यक पर्दछ.
पिट्यूटरी डिसअर्डर. हाइपोथायरायडिजमको अपेक्षाकृत दुर्लभ कारण पिट्युटरी ग्रंथिको विफलता पर्याप्त थाइरोइड उत्तेजक हर्मोन उत्पादन गर्न हो। (टी एच टी एचName) — सामान्यतया पिट्यूटरी ग्रन्थिको सौम्य ट्यूमरका कारणले.
गर्भावस्था. केही महिलाहरूले गर्भावस्थाको समयमा वा पछाडि हाइपोथायरायडिजम विकास गर्दछन् (प्रसवोत्तर हाइपोथायरायडिज्म), अक्सर किनभने तिनीहरू आफ्नै थाइरोइड ग्रंथिमा एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्छन्. उपचार नगरी छोडियो, हाइपोथायरायडिजमले गर्भपातको जोखिम बढाउँछ, समयपूर्व वितरण र preeclampsia — यस्तो अवस्था जसले गर्भावस्थाको अन्तिम तीन महिनामा महिलाको रक्तचापमा उल्लेखनीय वृद्धि गराउँदछ. यसले विकासशील भ्रूणलाई पनि गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ.
आयोडिनको कमी. ट्रेस मिनरल आयोडिन — मुख्य रूपमा समुद्री खानामा पाइन्छ, समुद्री शैवाल, आयोडीन युक्त माटो र आयोडीनयुक्त नुनमा उब्जनी हुन्छ — थाइरोइड हर्मोनको उत्पादनका लागि आवश्यक छ. धेरै थोरै आयोडिनले हाइपोथायरायडिज्म निम्त्याउन सक्छ, र धेरै धेरै आयोडिनले हाइपोथाइरोइडिज्म बिगार्न सक्छ पहिले नै सर्त भएका व्यक्तिहरूमा. विश्वका केही भागहरूमा, आयोडिनको अभाव सामान्य छ, तर टेबल नुनमा आयोडिन थपेकोले संयुक्त राज्यमा यस समस्यालाई वस्तुतः हटाएको छ.
यद्यपि जो कोहीले हाइपोथायरायडिजम विकास गर्न सक्दछ, तपाइँ बढेको जोखिममा हुनुहुन्छ यदि तपाइँ:
भन्दा पुरानो हो 60
थाइरोइड रोगको पारिवारिक इतिहास छ
एक स्वत: प्रतिरक्षा रोग छ, जस्तै प्रकार 1 मधुमेह वा celiac रोग
रेडियोएक्टिभ आयोडिन वा एन्टि-थाइरोइड औषधिहरूको उपचार गरिएको छ
तपाईको घाँटी वा माथिल्लो छातीमा विकिरण प्राप्त भयो
थाइरोइड सर्जरी गरेको छ (आंशिक थाइरोइडक्टोमी)
गएको six महिना भित्र गर्भवती भएको वा बच्चा सुम्पिएको छ
हाइपोथायरायडिजमको लागि मानक उपचारमा सिंथेटिक थाइरोइड हर्मोन लेभोथिरोक्सिनको दैनिक प्रयोग समावेश छ (लेभो- T, सिन्थ्रोइड, अन्य). यो मौखिक औषधी पर्याप्त हार्मोन स्तरहरू पुनर्स्थापित गर्दछ, हाइपोथायरायडिज्मको लक्षण र लक्षणहरूलाई उल्टाउँदै. र केहि जडिबुटी औषधी हाइपोथायरायडिजमका लक्षणहरूलाई कम गर्न र TSH लाई स्तरमा कायम राख्न महत्त्वपूर्ण प्रभावकारिताको रूपमा विकसित गरीएको छ.
तपाईको उपचार सुरु हुने बित्तिकै तपाईलाई राम्रो लाग्न सक्छ. औषधीले बिस्तारै कोलेस्ट्रॉलको स्तर कम गर्दछ र रोगले माथिल्लो स्तरमा सुधार गर्दछ र कुनै पनि वजनलाई उल्ट्याउन सक्छ. लेभोथिरोक्सिनको साथ उपचार सम्भवतः आजीवन हुनेछ, तर किनभने तपाईंलाई आवश्यक डोज परिवर्तन हुन सक्छ, तपाइँको डाक्टर तपाइँको TSH स्तर हरेक बर्ष जाँच गर्न को लागी सम्भव छ.
अघिल्लोप्रोस्टेट-विशिष्ट एन्टिजेन (पीएसएName) रगत जाँच